वेबपृष्ठहरूबाट डाटा निकाल्न सबैभन्दा प्रसिद्ध सफ्टवेयर - Semalt सिंहावलोकन
डाटा स्क्र्यापि tools उपकरण बिभिन्न वेब पृष्ठहरूबाट जानकारी निकाल्नको लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको हो। तिनीहरू वेब फसल कटाई सफ्टवेयरको रूपमा पनि चिनिन्छन् र प्रोग्रामरहरू, विकासकर्ताहरू, र वेबमास्टरहरूको लागि उपयोगी छन्। यी कार्यक्रमहरूले मूल्यवान डाटाको लागि खोजी गर्दछ र तपाईंको आवश्यकता अनुसार यसलाई स्क्र्याप गर्दछ। यहाँ हामीले वेबपृष्ठबाट सजीलै डाटा निकाल्न उत्तम सफ्टवेयरको बारेमा छलफल गरेका छौं।
१. आउबिट हब
आउटविट हब फायरफक्स एक्सटेन्सन हो। तपाईं यसलाई सजिलैसँग डाउनलोड र स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि यस सफ्टवेयरको साथ डाटा एक्स्ट्र्यासन कार्यहरू गर्न सक्नुहुनेछ। आउटविट हब राम्रोसँग यसको प्रयोगकर्ता-मैत्री इंटरफेसका लागि परिचित छ र उत्कृष्ट डाटा मान्यता सुविधाहरू छन्। उपकरण नि: शुल्क रूपमा, आउटविट हब गैर प्रोग्रामरहरू र फ्रीलांसर्सहरूको लागि उपयुक्त छ।
२. वेब स्क्रेपर
आउटविट हबको रूपमा, वेब स्क्रेपर एक वेबपृष्ठबाट डाटा निकाल्नको लागि एक भरपर्दो सफ्टवेयर हो। यो हाल गुगल क्रोम प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध छ र केहि मिनेटमा डाटा स्क्र्यापिंग कार्यहरू गर्न सक्दछ। वेब स्क्रेपरले बहुविध पृष्ठहरूबाट एकै साथ जानकारी निकाल्न सक्छ र बेजोड डाईनामिक डाटा निकासी क्षमताहरू छन्। यसले AJAX, कुकीहरू, रिडिरेक्टहरू, र जाभास्क्रिप्टको साथ पृष्ठहरू ह्यान्डल गर्न सक्छ।
Spinn3r प्रोग्रामरहरू, विकासकर्ताहरू, र स्टार्टअपहरूको लागि उपयुक्त छ। यसले सम्पूर्ण वेबसाइटबाट डाटा निकाल्न सक्दछ र मुख्य रूपमा समाचार साइटहरू, आरएसएस फिडहरू, सामाजिक मिडिया साइटहरू र ट्राभल पोर्टलहरूलाई लक्षित गर्दछ। Spinn3r ले एपीआई प्रयोग गर्दछ र 90 ०% वेब क्रलिling र डेटा निकाल्ने परियोजनाहरू इन्टरनेटमा प्रबन्ध गर्दछ। यसको वेब-क्रलि system्ग प्रणाली गुगलसँग मिल्दोजुल्दो छ र Spinn3r तपाईंको डाटा CSV र JSON ढाँचामा बचत गर्दछ। यस उपकरणले निरन्तर वेब पृष्ठहरू स्क्यान गर्दछ र केहि मिनेटको मामलामा तपाईलाई अपेक्षित परिणामहरू दिन्छ।
Fminer एक दृश्य डाटा स्क्रैपर हो कि शीर्ष-खाच सुविधाहरूको संयोजन गर्दछ। Fminer को साथ, तपाईं एक साथ धेरै वेब स्क्र्यापि ping कार्यहरू प्रदर्शन गर्न सक्नुहुनेछ र यसरी तपाईंको समय र उर्जा बचत गर्न सक्नुहुनेछ। यसले AJAX र कुकीजको साथ साइटहरू पनि ह्यान्डल गर्न सक्दछ। Fminer वेबमास्टरहरू र स्टार्टअपहरूको लागि उत्तम छ र तिनीहरूलाई केही पनि खर्च गर्दैन। यसले समाचार आउटलेटबाट डाटा ल्याउँदछ र इन्टरनेटमा स्पाम सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ।
Dexi.io इन्टरनेट मा एक राम्रो र सबै भन्दा विश्वसनीय डेटा स्क्र्यापिंग सफ्टवेयर हो। तपाईंले यो उपकरण डाउनलोड गर्न आवश्यक छैन; वास्तवमा तपाईलाई यसको वेबसाइट खोल्न आवश्यक पर्दछ र तपाईंको डाटा तुरुन्तै स्क्रॅप हुन्छ। यो ब्राउजरमा आधारित उपकरण हो जुन धेरै क्षमता र अद्वितीय सुविधाहरूको साथ आउँदछ। Dexi.io ले तपाईंको डाटा JSON र CSV फाईलहरूमा निर्यात गर्दछ वा यसलाई Google ड्राइव र Box.net मा बचत गर्दछ।
वेबसाइटबाट डाटा निकाल्न यो उत्तम र प्रख्यात सफ्टवेयर हो। ParseHub ले जटिलता डेटा निकासी कार्यहरू र लक्षित साइटहरू जाभास्क्रिप्ट, कुकीज, रिडिरेक्टहरू, र AJAX ह्यान्डल गर्न सक्दछ। यो उपकरण म्याक, विन्डोज, लिनक्स र आईफोन प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध छ। तपाईं सजिलैसँग यो सेवाको साथ data डाटा स्क्र्यापि or वा वेब क्रलिling्ग परियोजनाहरू पूरा गर्न सक्नुहुनेछ।
अक्टोपार्सेले पहिले तपाईंको डाटा पहिचान गर्दछ, यसलाई तुरुन्तै स्क्र्याप गर्दछ, र निकालेको जानकारी तपाईंको हार्ड डिस्कमा बचत गर्दछ। यो बहु साइटहरू मार्फत नेभिगेट गर्दछ र तपाईंको लागि उपयोगी सामग्री एकत्रित गर्दछ। अक्टोपार्से प्रोग्रामरहरू र डाटा विश्लेषकहरूको लागि राम्रो विकल्प हो। यो राम्रोसँग यसको मेशिन लर्निंग टेक्नोलोजीको लागि परिचित छ र तपाईको डेटा HTML, एक्सेल, CSV र TXT ढाँचामा निर्यात गर्दछ।